Mujaahidiinta Oo Howdka Ku Baacsanaya Maleeshiyaadkii Kusoo Duulay Tiyeeglow. – Calamada.com
Mujaahidiinta Oo Howdka Ku Baacsanaya Maleeshiyaadkii Kusoo Duulay Tiyeeglow.
calamada November 15, 2016 1 min read
Wararka naga soo gaaraya deegaanada ku dhowdhow degmada Tiyeeglow ayaa ku waramaya in dagaal culus oo bilowday maanta saddex saac oo subaxnimo jab ba’an loogu gaystay maleeshiyaad ka tirsan kuwa dowladda Fadaraalka oo shalay isku dayay inay dib u qabsadaan degmada Tiyeeglow.
Maleeshiyaadkan oo ahaa kuwii Axmaarada hore usii raacay markii ay ka baxeen Tiyeeglow ayaa canaan ba’an kala kulmay Axmaarada iyo madaxda ridada Soomaaliya kuwaasoo maleeshiyaadkan kusoo qasbay inay dib u weerar tagaan oo tiyeeglow ku laabtaan iyagoo aan ka fikirin masiirka maleeshiyaadkaasi ay ku dambayn doonaan.
Wararka ugu dambeeya ee aan ka helayno jiidda dagaalka ee duleedka Tiyeeglow waxay ku waramayaan in maleeshiyaadkii si ba’an loo jabiyay oo ay haatan maydadkooda uga tageen furimihii lagu dagaalamay.
Mujaahidiinta ayaa kusoo waramaya in wali lagu dabo joogo maleeshiyaadkaasi oo dagaalo goosgoos ahi dhacayaan isla markaana saacadaha soo socda la ogaan doono khasaaraha rasmiga ah ee gaaray iyo halaaga qabsaday maleeshiyaadkaasi.
Previous: Dhageyso Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Bakool.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 15-02-1438 Hijri